Fifaninanana Edge-Nantong GAOYA vy FIRAFITRA CO., LTD.
Home>Momba ANAY>fifaninanana Edge
Ny fifaninanana Edge
Manana ny ekipa ny injeniera izay fitaovana tanteraka ny tena efa mandroso ny teknolojia. Famolavolana kajikajy rehetra，levitra sary,tsena antsipirihany sy ny volavolan-dalàna ny materias dia niteraka homarinana avy amin'ny teny sy navoakan'ny ny toam ny ekpets.
GAOYA manana fototra matanjaka ny orinasa mpamokatra entana fahaizana miaraka amin'ny fanohanan'ny ny tale,izay manana traikefa farany 23 taona in dilferent orinasa. GAOYA amin'izao fotoana izao dia manana sampana miorina amin'ny orinasa mpamokatra entana Jiangsu,tena nety ny toerana misy ny zavakanto milina mba cater injeniera needs.Employees rehetra dia tanteraka nampiofanina mba hiatrehana ny entana amin'ny fikarakarana sy fiarovana.
Manolotra ny tsara indrindra isika fifaninanana vidin'ny famokarana inthe industry.Our capacityand fanjakana-avy-teknolojia ahafahan'ny zavakanto usto tandrify manolotra vahaolana amin'ny leastcost.
On Fandaharana Delivery
Nanomboka avy amin'ny fakan-teny followedby fankatoavana sary sy ny fitaovana,allare avy hatrany nanolotra toy ny isan-ny clientrequirements.Generally M Ost ny thebuildings Efa voavonjy ao anatin'ny 8 weeksof fotoana.